Shrimp Uye Crab Vagadziri - China Shrimp Uye Crab Vatengesi & Fekitori
Chakagadzirwa Shrimp Soft Fishing Kukwezva Soft Bait Kukwezva
Yakaderera Mutengo Bionic Bait Kupenya Shambira Bait Soft Fishing Plastiki Lure squid Jig Shrimp
Wholesale Soft Shrimp Kukwezva Anopenya Maziso Kubata Kubata
Nyoro Nyowani 7CM / 9CM Shrimp Inoshambira Baits Yakajeka Hove Kubata
Kuredza Hove Runyoro Runyoro Runyoro Kuteedzera Mapake Craws / Shrimp
1.Fishing Nzira: Fly Fishing Gungwa Fishing Trolling & Boat Fishing General Fishing Kukwereta Fishing Bass Fishing Carp Fishing Mvura Yemvura Yekunze Kubata Jigging Fishing Kupota Bait Kukanda
Rudzi rweLure Kukambaira / Shrimp
Kupfava Kwehove Kukwezva Shrimp Luminous Chakagadzirwa Chirauro
Nyoro squid Kukwezva
1.Material: nesilicon ikanyanya
3.Mavara: Mazana emavara aripo.
4.Package: OPP bhegi.Customer's requirment inogamuchirwa.
5.Function: mhando dzakasiyana dzakakodzera hove nyowani dzemvura uye hove yemvura yemunyu
6.Attractive hove hwema uye kurarama kushambira chiito.Catch zvakawanda hove nyore.
7.Best yekutsika hove.
8.Magadzirirwo akagadzirwa, Yakasarudzika chitambi inogamuchirwa.
Fekitori Mutengo Nyoro Shrimp Kukwezva
Shrimp nyoro ndiyo inofarira mabass. Mushure mekunyura pasi pezasi pemvura, kumusoro uye pasi kwetsvimbo kuzunguzika zvishoma, zvichiita kuti chirauro chisvetuke kumusoro uye pasi kukwezva hove yakanangwa. Kusvetuka kudiki kwe shrimp pamusoro pevhu kunogona zvakare kukwezva tarisiro yemvura. Asi nguva yekuzunza haifanire kunge yakarebesa, panofanirwa kunge paine pfungwa yehythm, kunzwa uku kunoda kubatwa muhondo chaiyo.
Chakagadzirwa Bass Nyoro Shrimp Plastiki Lure
Chakagadzirwa Crab Kukwezva Bait 3D Kufananidza Kwakapfava Hove Bait
Bio-inoparadzaniswa yakapfava epurasitiki yekugadzira crab baits
1.3D muviri wakapfava unochinjika, uchiita kuti hove dzinodya nyama dzive dzinopenga.
Mumuviri wemukati unoshandisa mapepa ekucheresa tainbow anoratidza mwenje mushe, achikwezva hove nekukasira.
3.Simulation frog muviri, yakajeka swimmming chiito.
4.Super yakapfava, yakatambanudzwa uye yakasimba; yekupedzisira kuburikidza nekubata kwakawanda
5.Environmental zvine hushamwari, bio isingaparadzane, chepfu isina
Yakapfava Crab Plastic Bait
Lifelike Bait Bionic Glow Crab Hook Soft Plastiki Lure Fishing Tackle
Multi mavara (bvuma tsika)